दुर्गेश प्रकरणमा गायक बद्री पंगेनीले दिए यस्तो जवाफ(भिडियो सहित)
July 25, 2020 572
पछिल्लो समय नेपाली कलाकारहरु ट्रोलको शिकार भइरहेका छन् । नजानेको विषयमा ‘जान्दिन’ भन्न नसक्ने र गलत जवाफ दिएका कारण केही अभिनेत्रीहरु सामाजिक संजालमा ट्रोल’रको निशानामा परे ।
केहीले अनावश्यक रुपमा बढी बोलेर आलोच’नाको शि’कार भए । केही भने आफ्ना सहकर्मीलाई बचाउने चक्क’रमा आफैं चिप्लिएर आलोचि’त भए ।
यद्यपि यी विषयमा भइरहेका ट्रोलको विरोध गर्दै कलाकारको बचाउ गर्नेले ‘सबै कुरा जान्नै पर्छ र ?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै कलाकारहरुको बचाउ गरे । कला क्षेत्रका व्यक्तिलाई राजनै’तिक विषय, सामान्य ज्ञानका कुरा सोधेर चेपुवामा पारिएको तर्क गरियो ।
आफ्नो क्षेत्रबारे पो जानकारी हुन्छ, सबै क्षेत्रको जान’कारी कहाँ हुन्छ ? भनेर बचाउ गरियो ।तर, पछिल्लो समय गायक दुर्गेश थापा ट्रोलरको निशानामा परेका छन् ।
निशानामा पनि यसरी परेका छन् कि उनले अरुले जस्तो ‘आफ्नो क्षेत्रबाहिरको’ कुरा सोधिएको भनेर बचाउ ग’र्ने ठाउँ पनि बाँकी छैन ।
उनले अरु विषय’मा होइन आफ्नै क्षेत्रको कुरामा गल्ती गरिदिए । संगीत क्षेत्रकै ज्ञान नभएको देखिएपछि अहिले दुर्गेशमाथि ट्रोलरहरु खनिएका छन् । पत्रकार ऋषि धमलालाई दिएको अन्तर्वार्ता’मा दुर्गेश’लाई स्वरसम्राट नारायण गोपालको गीत गाउन भनिएको थियो ।
धमलाले नारायणगोपालको गीत गाउन भने तर दुर्गेशले भक्तराज आचार्यको गीत ‘मुटु जलिरहेछ’ गाइदिए । यतिमात्र होइन दुर्गेशले नारायणगोपालको गीत आफूले धेरै सुन्ने गरेको भने तर नारायणगोपालको गीत चिन्न सकेनन् ।
दुर्गेशको यो गल्तीसँगै सामाजिक संजालमा प्रश्न उठेको छ –‘आफूलाई गायक हुँ भन्ने, नारायणगोपालको गीत नचिन्ने ?’ धमलाले दुर्गेशलाई यत्तिमै धर दिँदैनन् ।
धमलाले शिव परियारको गीत गाउन लगाउँदा ‘पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले’ गाउँछन् तर शब्द बिगार्छन्। यम बरालको गीत गाउन पठाउँदा रामकृष्ण ढकालको ‘ओराली लागेको हरिणको चाल भो’ गीत गाउँछन् । यसको भिडियो तल छ
अर्को पनि समाचार….
निर्माता, निर्देशक एवं सदाबहार अभिनेता भुवन केसीले अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहवि’रुद्ध क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मु’द्दा दायर गरेका छन् ।
अभिनेता एवं निर्देशक केसीले शुक्रबार १० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै अभिनेत्री शाहवि’रुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मु’द्दा दायर गरेका हुन् ।
अभिनेता केसीको निवेदनमा आफूलाई अभिनेत्री शाहले बेइज्जत गरेको उल्लेख गरेका छन् । जानकारी अनुसार विभिन्न पत्रपत्रिका, अनलाइन र युट्यूवमा अभिनेत्री शाहले आफूलाई यौन दूव्र्यवहारको मिथ्या आरोप लगाएर बेइज्जत गरेको भन्दै अभिनेता केसीले मु’द्दा दर्ता गरेका हुन् ।
विगत केही समय अघिदेखि अभिनेत्री शाहले ‘ड्रिम्स’ फिल्ममा काम गर्ने क्रममा आफू दु’व्र्यव\_हारको शिकार हुनुपरेको बताएकी थिइन् । हालसम्म ८ वटा फिल्ममा काम गरेकीमध्ये तीन वटा फिल्ममा नराम्रो अनुभव भोग्नुपरेको अभिनेत्री शाहले बताएकी थिइन् ।
यसका साथै, अभिनेत्री शाहले आफूमाथि भएका दू’व्र्य’वहारका घटना बाहिर नल्याउन पटक–पटक दबाव आउनुका साथै घटना सार्वजनिक गरे फिल्मी करिअर सकिदिने ड’रसमेत देखाइ’एको बताएकी थिइन् ।
दुर्गेश सम्बधी भिडियो हेर्नुहोस ।।
Prevसात टाउके नागको काँचुली फेला परेपछि हेर्ने मानिसको भिड
Nextट्रोलको शिकार भए दुर्गेश, नारायण गोपालको गीत भन्दै अरुकै स्वरको गाए गीत (भिडियो सहित)
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (132842)